स्कुलमा गोली चल्दा १० जनाको मृत्यु ! – www.agnijwala.com
स्कुलमा गोली चल्दा १० जनाको मृत्यु !
ब्राजिलको सबैभन्दा ठूलो सहर साओ पाउलोको राउल ब्राजिल पब्लिक स्कुलमा स्थानीय समयअनुसार बिहान साढे नौ बजे गोली चल्दा कम्तीमा दश जनाको मृत्यु भएको छ । बुधबार भएको सो घटनामा परी अरु केही घाइते भएको पनि अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् ।
एजेन्सीका अनुसार शुरुमा आठ जनाको मृत्यु भएकोमा पछि दश पुगेको हो । मृत्यु हुनेको संख्या अरु पनि बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
घटनामा परी घाइते भएका १७ जनाको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको अधिकारीहरुले जनाएका छन् । घटना थाहा पाउने बित्तिकै अभिभावक र छिमेकीहरु विद्यालयमा पुगेका थिए । गोलि कसले चलाउनेको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। गोलि कसले र के कारणले चलाएको खुल्न बाकी छ।